Qalab suurgalinaya in 20 daqiiqo gudaheed lagu ogaado bukaanka qaba COVİD-19. - Tilmaan Media
in CAAFIMAAD, TEKNOLOJIYAD
Cilmi-baarayaal reer Ustaraaliya ah ayaa soo saaray qalab lagu ogaan karo ruuxa qaba Korona Fayras muddo labaatan daqiiqo gudaheed ah iyadoo la qaadayo sambalo dhiig ah. Arintaan ayay ku tilmaameen cilmi-baaarayaashu halabuurkii ugu muhiimsanaa ee lasameeyo tan iyo intii uu Korona Fayras bilawday dhamaadkii sanadkii 2019.
Cilmi-baarayaasha oo katirsan jaamacadda Monash University, ayaa sheegay in qalabkaan baaritaan uu fududaynayo in la ogaado in qofku markaas uu xanuunka qabo iyo haddii wakhti hore soo qaadayba .
“Waxaa loo baahan yahay baaritaano dhakhso ah oo lagu ogaanayo kiisaska markaas la baarayo iyo dabagal lagu sameeyo dadka uu la xiriiray bukaanka fayraska laga helay si loo ogaado heerka uu gaarsiisan yahay iyo tirada dadka qaba fayraska” ayaa lagu yiri qoraal ay cilmi-baarayaashu ku daabaceen Jimacadii laso dhaafay joornaalka ACS Sensors.
Sida cilmi-baarayaashu sheegeen qalabkaan cusub wuxuu suurtagalinayaain hal saac oo kasta labaaro boqolaal ruux. Sidoo kale waxay rajjo kamuujiyeen in la xakamayn karo difaacyada jirka ee kahor imaanaya tallaalada xilliga tijaabooyinka la samaynayo.